သာလွန်ဇောင်းထက်| January 1, 2013 | Hits:4,349
Htay Aung January 1, 2013 - 8:02 pm I really want everyone to read this article,especially leaders from the both sides of government and opposition . It made me feel so sad.
Reply U Ba Yee January 1, 2013 - 9:00 pm I like Irrawaddy.
Reply Myo Nyunt January 1, 2013 - 9:42 pm စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်တော့ ဗမာက ကချင်ကိုမုန်း ကချင်က ဗမာ
Reply လဆိုင်း January 2, 2013 - 12:28 am ကေအိုင်အေက အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်တာတွေကိုကျတော့ ဘယ်သူမှ သတင်းအမှန်မတင်ကြဘူးလား။ ပြည်သူတွေကို လူသစ်စုဆောင်းရေးဆွဲတယ်၊ ပြည်သူတွေသွားတဲ့လမ်းတွေမှာ မိုင်းထောင်တယ်၊ ဆက်ကြေးကောက် တယ်၊ မိန်းကလေးတွေကို ဖျက်ဆီးတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နယ်စပ်မှာနေ တဲ့ ပြည်သူတွေက ကေအိုင်အို ကို လူတိုင်း မုန်းတယ် ။ စစ်တပ်က သူ့စခန်းမှာ နေရင် ကေအိုင်အေက လာလာပြီးမှ ချောင်းပစ်တယ် ဒါတွေကို သတင်း ဌာနတွေက သိပါသလား။ သေချာလေ့လာပြီးမှ သတင်းအမှန်ကို ပြည်သူလူထုသိအောင် တင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အရမ်းတဖက်သတ်မရေးသင့်ပါဘူးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
Reply နိုင် အားကောင်း January 2, 2013 - 4:12 pm ကောင်းတယ် မှန်တယ် မျှတမှုရှိတယ်။
Reply အောင်တင် January 2, 2013 - 12:39 am တောခိုတုန်းက တောထဲက ကရင်ခလေးငယ်တွေကို မင်းတို့ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲမေးတဲ့အခါ ခလေးတွေက ကြီးလာရင် စစ်သားလုပ်ပြီး ဗမာကို သတ်မယ်လို့ ဖြေတတ်ကြတယ်။ သူတို့အသိမှာ သူတို့ ရွာတွေ မီးရှို့ခံရလို့ ပြေးရတာတွေ၊ အရိုက်ခံရ အသတ်ခံရတာတွေ၊ မုဒိန်းမှုတွေက ဗမာတွေကြောင့်လို့ဘဲ ရိုးရိုးလေးသိထားတယ်။ စနစ်ကြောင့်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ပညာသင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေလဲ မရှိကြတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒါကို တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တောခိုဘူးတဲ့ မြန်မာတိုင်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Reply pnwara January 2, 2013 - 7:07 am ကြားရတာ စိတ်ကောင်းပါဘူး- ဒီလို အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်ကြပါ။ အဲဒီဒေသမှာ ရှိကြတဲ့လူထု နဲ့ ကလေးတွေ ပြန်လည်နေရာချပေးပါ- စစ်တိုက်လို့ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး လုံးဝ မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဒီကိစ္စမှာ နှာစေးမနေပါနဲ့ -ပြောသင့်ပြောထိုက်တာ ပြောကြပါ။ ရွေးကောက်ပွဲနားနီးမှ လူထုနဲ့ ထိတွေ့ ပြီး မျက်နှာချိုသွေးတဲ့ မူမမှန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ -
Reply Sai Suriya January 2, 2013 - 8:48 am How can majority Bamar lumyo understand the complexities of inequalities and injustice suffered under the so called Union of Burma or Myanmar whatsoever. As long as the ruling government refuses to acknowledge the treaty of Panglong signed by the respected leaders including Bogyoke Aung Sann and ethnics leaders. As of today, the Panglong Treaty is still as valid as the day it was signed. Failed to honor it will be the biggest mistake for the majority Bamar government and it will be the most unfortunate scenario for the future of Burma/ Myanmar.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 3, 2013 - 3:24 am Sai Suriya ဆိုတဲ့သူ၊ ဗမာ/မြန်မာ ပြည်အကြောင်း အပေါ်ယံ လျှပ် လျှောက်မပြောနဲ့။ ခင်ဗျားရေးတဲ့ ‘How can majority Bamar lumyo understand the complexities of inequalities and injustice suffered under the so called Union of Burma or Myanmar whatsoever’ ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ ဗမာ/မြန်မာ တွေလဲ သည် မကောင်းတဲ့ အစိုးရ ဆိုးဒါဏ် ခံနေရသူ အများကြီးပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ရှမ်း၊ ကချင်အစ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးထဲမှာလဲ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း အနေနီးစပ်ပြီး ဇိမ်ကျနေသူ၊ သည်လို ဒုက္ခဒါဏ် မခံရသူတွေ အပြည့်။ အခု စစ်တိုက်တာ မရပ်ချင်တဲ့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ဆိုရင် ဗမာ မဟုတ်ဘူး။ မွန်လူမျိုးတဲ့။ လူတစုရဲ့ ခံယူချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လူမျိုးတမျိုးလုံးကို အပြစ်ပြောလို့ မရဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ နိုင်ငံအနှံ့သွားတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားကိုးတကြီးနဲ့ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုကြတယ်။ ခင်ဗျား အမြင်ကျဉ်းလွန်းတယ်။
Reply swe htwe January 3, 2013 - 1:36 pm That’s right. I agree to you,taiyintu.
Reply Sai Suriya January 3, 2013 - 4:10 pm It is true from Burmese point of view who does not understand the real suffering of ethnics people. After the independence of Burma, our treaty was cheated in various forms. It is true under the military regime Burmese are suffering too asafirst class citizen but we, ethnics are treated like second class citizen. Our language cannot be taught openly. Our cultural monuments were destroyed. History was eradicated. How many of Bamar understand this. We are facing war in two fronts. To get genuine unity or Union, we have to honor the treaty signed by our leaders. As long as majority Bamar places ethnics suffering on par with Bamar , then we cannot achieve genuine unity. BTW, why is Bamar language , culture and history should be the language , culture and history of the Union? If Bamar lumyo sincerely wants genuine unity, we have to work harder than this. Bamar lumyo , majority of the population has to proof that it is the best solution to co-exist asaUnion. We have to openly discuss from the point of minority. But please note, we do not need your sympathy for all the suffering. But we need the understanding so that this kind of second class issue will never happen again. So far, Bamar are proving that they are not the culprit of this situation.
Reply chitchitshit January 4, 2013 - 4:33 pm Eating cheapest stake and drinking $2 wine and scare to spent money in new year and using free internet?
Reply Sai Ladu January 4, 2013 - 4:54 pm suffering ethnics people or ethnics rebel famlies?
Reply KnooKnow January 2, 2013 - 2:50 pm ကျနော်က ကချင်ပါ။
Reply Sein Hla Din January 2, 2013 - 11:04 pm Children are always innocent but they are colored by the irresponsible leaders from all sides.
Reply san san latt January 12, 2013 - 7:46 pm I’manurse.I don’t want to hurt anyone physically or mentally.So both army ,please think of human beings.